Israel na-eme ihe iji belata mgbasa nke Coronavirus COVID-19 zuru ụwa ọnụ
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Safety » Israel na-eme ihe iji belata mgbasa nke Coronavirus COVID-19 zuru ụwa ọnụ
Airlines • Na-agbasa News Travel • Akụkọ na -agbasa ozi China • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ kacha ọhụrụ na Hong Kong • Israel Na -agbasa Akụkọ • Akụkọ na -agbasa ozi Japan • News • Safety • Akụkọ na -agbasa na Singapore • Akụkọ South Korea na -agbasa • Akụkọ na -agbasa Taiwan • Akụkọ na -emegharị na Thailand • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ dị iche iche
Israel anaraghi ohere obula ntiwapụ na mgbasa nke coronavirus COVID-19. Ọtụtụ akagbuola ụgbọ elu a machibidoro ndị ala ọzọ si mba ụfọdụ ahọpụtara ịbata Israel.
Cathay Pacific akwụsịla ụgbọ elu dị n’etiti Tel Aviv na Hong Kong n’etiti Febụwarị 24 na Machị 31. Thegbọ elu Hong Kong ebelatala oge ụgbọ elu dị n’etiti Tel Aviv na Hong Kong mgbe ntiwapụ nke nje ahụ.
A tụrụ anya na a ga-akwụsị ụgbọ elu niile ka mịnịstrị na-ahụ maka ahụike n’Izrel machibidoro ụmụ amaala China, Hong Kong, Singapore na Thai ịbata mba ahụ. A chọrọ ka ndị Izrel niile si mba ndị ahụ lọta kewapụ onwe ha iche ruo izu abụọ.
El Al akwụsịlarị ụgbọ elu ya n'etiti Tel Aviv na Hong Kong ruo Machị 31. Ebe ọ kwụsịtụrụ ụgbọ elu ya na Beijing na Hong Kong, onye ọrụ ụgbọelu nke Israel ga-akwụsịkwa ụgbọ elu Bangkok.
Otu ụgbọ elu Korea Air nke dara na Israel nwere ụmụ amaala Korea 200 na ụmụ Israel iri na abụọ. Gbọelu a gbara ebe tere aka site na ụlọ nke ọnụ, na ezigara ndị njem nke Israel ụlọ iche maka ụbọchị iri na anọ. A jụrụ ndị njem Korea ịbanye na obodo ahụ ma mgbe emechara ụgbọ elu ahụ ma weghachite ya, ga-eme njem elekere iri na abụọ laghachi na Seoul na ndị ọrụ nnọchi anya ndị ọzọ.
Korean Air na-arụ ụgbọ elu anọ kwa izu n'etiti Seoul na Tel Aviv. Ugbu a, ụgbọ elu ndị a ga-akwụsịtụ, dịka ụgbọ elu niile dị n'etiti Israel na China na Hong Kong.
N'oge a, enweghị usoro izugbe gbasara South Korea, mana ndị njem nlegharị anya Korea ugbu a na Israel ga-abanye ozugbo ịpụ iche, dị ka ndị Israel ga-esi South Korea laghachi. A gbasaa iwu iji kpuchie ndị njem Israel na-alọta site na Japan, Macau, Singapore, na Taiwan. Onye isi nhazi ndị ọrụ njem Israel nke na-abata na Yossi Fattal agwala ndị otu ahụ na ndị otu si South Korea, Japan na Taiwan na-eme atụmatụ njem na Israel kwesịrị ịgwa ha ozugbo na akagbuola njegharị ahụ.
Ministri Ahụike nke Israel na-anwa ịchọpụta ma COVID-19 ọ jidere n'Israel n'ihi nleta nke ndị njem nleta Korea bụ ndị achọpụtara na ya na nloghachi ha na Korea. Ozi ahụ ebipụtala njem ndị njem Korea na ụkpụrụ nduzi maka ndị nwere ike ịbanye na ha.
E tinyela Japan na Taiwan na ndepụta mba nke Mịnịstrị Ahụike na-amachibido mbata nke ndị mba ọzọ na Israel. A ga-achọ ka ndị bi na Israel nọrọ oge na mba ndị a tinye iche mgbe ha laghachiri Israel. Ndepụta a gụnyere China, Hong Kong, Singapore, na Thailand. Ministri na-ahụ maka njem nleta emeela ka ndị ọrụ mara ọkwa na ha ga-akagbu njem ha na Israel site n'aka ndị bi na Japan na mba ndị ọzọ.
Cathay Pacific Coronavirus Covid-19